Iifoto zikaGoogle zandisa ukusebenza kwenkonzo yayo | TeraNews.net
umbhali UNikitin Eugenius Papashwe ngomhla 10.09.2021
UGoogle uhlala ephucula iinkonzo zakhe kunye nezinto ezintsha ezichaphazele Iifoto zikaGoogle ukuthanda abasebenzisi. Ukugcina iigigabytes zeefoto kwilifu kukhulu, kodwa kukufutshane. Unyaka nonyaka, abanini bayazisusa iifoto ukuze bandise indawo okanye bathumele iinkumbulo ekulibeleni. Ke ngoko, isicelo senkampani - ukungazenzi iifoto eziqaqambe kwifom yamaphepha, ibe sisindululo esinomdla nesifunwayo. Kuyinyani, inkonzo iyafumaneka ukuza kuthi ga ngoku eMelika nase Canada. Kodwa kwakamsinya oku oku kuya kuchaphazela onke amazwe ehlabathi.
Iifoto zikaGoogle-phrinta iifoto kwaye uzithumele kumniniyo
Akukho sidingo sokuchitha ixesha ukhangela iinkampani ukuba zithumele iifoto ezisemgangathweni ephepheni. UGoogle uyakwenza konke oku kuthi. Nokuba yeyemali, kodwa umgangatho uya kuba phezulu kakhulu. Abasebenzisi banikezelwa ukufumana ushicilelo kulo naluphi na uhlobo lomhlaba-iphepha, iseyile, ilaphu, njalo njalo. Gloss okanye matte umphezulu, unyango loyilo, ubungakanani - unokukhetha nayiphi na ipharamitha. Kwaye elona candelo lililo kukuba iseti iza nealbham yefoto enophawu kwiipakethe ezithambileyo okanye ezinzima.
Kungabonakala kungaqhelekanga kwabanye, kodwa ngokweenkcukacha-manani, ngaphezulu kwe-90% yabasebenzisi kudala (ngaphezulu kweminyaka engama-20) bayeka ukuprinta iifoto ephepheni. Ngelo xesha akukho mnqweno. Nokuba iinkampani zokuprinta azifumaneki kuzo zonke iidolophu- ziye zaphuka ngenxa yokunqongophala kwemfuno. Kutheni ungasebenzisi inkonzo efanelekileyo eya kuthi incede abantu bayo nayiphi na iminyaka bagcine iinkumbulo zabo ngonaphakade.
Ukubonelelwa ngeefoto zikaGoogle kunomdla kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo uya kufumana inkxaso phakathi kwabalandeli bokuthatha imifanekiso engalibalekiyo. Kubalulekile ukulandela izikhokelo zenkampani kumgangatho wemifanekiso yedijithali ngokwazo (isisombululo). Emva kwayo yonke loo nto, xa uhambisa umfanekiso kwiphepha, kufuneka umgangatho ofanelekileyo. Ubukrelekrele bokufakelwa kukaGoogle bunokuhlela iifoto, kodwa kungcono xa ifayile yoqobo ihlangabezana nazo zonke iimpawu ezichaziweyo.
X2 mini camera for kids asiyocamera yomntwana kwaphela
Yiyiphi iTV engcono ukuyithenga - i-4K okanye i-FullHD
IGarmin Venu 2 Plus-into entsha kwimakethi ye-smartwatch
Iirobhothi zeTesla Bot-into entsha yokuzonwabisa kaElon Musk
Iwotshi yePixel-iGoogle smartwotshi
I-DAC Topping E30 - inkcazo, iinkcukacha, iimpawu
I-LG DualUp-Monitor ngomlinganiselo we-16:18
Ubhaka ongqongqo kunye nesitayile wabantwana besikolo
Abantu bayakwazi ukuqaphela iimpawu zokuqala zesifo
REMOTE G21 Pro: isishwankathelo, isikhombisi
Inkqubo yokwahlulahlula: Iindidi zee-air conditioners, indlela onokuthi ukhethe ngayo
xxx kodwa kushushu umzimba wendalo camgirl uhlekise ngesisu.